Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 18: akụkọ ihe mere eme nke San Carlo da Sezze | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 18: akụkọ ihe mere eme nke San Carlo da Sezze
(19 Ọktoba 1613-6 Jenụwarị 1670)
Charles chere na Chineke na-akpọ ya ka ọ bụrụ onye ozi ala ọzọ na India, ma ọ ruteghị ebe ahụ. Chineke nwere ihe ka mma maka narị afọ nke 17 a nọchiri Nwanna Juniper.
Amụrụ na Sezze, ndịda ọwụwa anyanwụ Rome, Charles sitere na ndụ Salvator Horta na Paschal Baylon bụrụ onye Franciscan; o mere nke a na 1635. Charles na-agwa anyị na akụkọ ọdịnala ya: "Onyenwe anyị tinyere n'ime obi m mkpebi ikpebi ịbụ nwanne nwoke nkịtị nke nwere nnukwu ọchịchọ ịda ogbenye na ịrịọ maka ịhụnanya"
Carlo jere ozi dị ka osi nri, ọtụ ọnụ, sacristan, onye na-elekọta ubi na onye arịrịọ n'ọtụtụ ebe izu ike na intali. N'echiche, ọ bụ "ihe mberede na-eche ime". Onwere mgbe ọ huru nnuku oku na kichin mgbe mmanu ya na-agba oyịm n’ọkụ gbara.
Otu akụkọ gosiri etu Charles siri were mmụọ nke St. Francis. Onye nke kachasị elu nyere iwu Carlo, onye na-eburu m ibu mgbe ahụ, ka ọ na-enye naanị ndị ọchịagha na-eme njem pụtara n'ọnụ ụzọ. Charles rubere isi na ntụziaka a; n’otu mgbe ebere na friars belatara. Charles kwenyere na onye ka elu na eziokwu abụọ ahụ nwere njikọ. Mgbe ndị ọka ikpe maliteghachiri inye ndị rịọrọ n'ọnụ ụzọ ngwongwo ahụ, onyinye ebere nke ndị friar ahụ mụbara.
N'okpuru ntụzi aka nke onye nkwupụta ya, Charles dere akụkọ ndụ ya, The Grandeurs of the Mercies of God. O dekwala ọtụtụ akwụkwọ ndị mmụọ. O jirila ndị nduzi ime mmụọ ya dị iche iche mee ihe nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ; ha nyeere ya aka ịghọta nke sitere n'echiche ma ọ bụ n'ọchịchọ Charles sitere na Chineke. Charles n'onwe ya chọrọ ndụmọdụ ime mmụọ. Popu na-anwụ anwụ Clement IX kpọrọ Charles n'akụkụ akwa ya maka ngọzi.
Carlo nwere nkwenye siri ike na mmụọ Chukwu. Nna Severino Gori kwuru, sị: "Site n'okwu na ihe atụ o chetaara onye ọ bụla mkpa ọ dị ịchụso naanị ihe ga-adị ebighi ebi" (Leonard Perotti, San Carlo di Sezze: A 'autobiography, p. 215).
Ọ nwụrụ na San Francesco a Ripa na Rome wee lie ya ebe ahụ. Pope John nke iri abụọ na abụọ tiri ya akwụkwọ na 1959.
Ihe ejije na ndu ndi nso kariri ime ime. Ndụ Charles pụrụ iche ma ọ bụrụ naanị n'ịmekọrịta ya na amara nke Chineke.Ọ masịrị ya na ịdị ukwuu nke Chineke na nnukwu ebere ya n'ebe anyị niile nọ.
Ihe 7 ịmara banyere ọnwụ, ikpe, eluigwe na hel
Ihe dị nsọ na nke agọziri agọzi: kedu uru ha bara?
March 8: ihe putara ibu nwanyi n’anya Chineke
Obu nmehie muru nwa n'alughi di?
Anya mmiri Meri: nnukwu ọrụ ebube
Zọ 4 ka esi akuziri ụmụaka ihe banyere Lenti